यसकारण फेरी एकपटक देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन नराम्रोसँग पछारिदै ! – Halkhabar kura
७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १७:३०
यसकारण फेरी एकपटक देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन नराम्रोसँग पछारिदै !
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमामा दुई वटा दाबी परेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका छन्। हिजो बिहीबारमात्रै बहुमत जुटाउन नसक्ने निष्कर्षका साथ मार्गप्रशस्त गरेको बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन्। उनले बुझाएको हस्ताक्षरमा भने एमालेका १२१ सांसदको हस्ताक्षर आफैंले र जसपाका ३२ जनाको सांसद महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेको बताइएको छ।
यहि बिचमा अबको परिस्थिति के होला भन्ने अन्योलता रहिरहेको छ। तर,फेरिपनि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा निर्णय आउने सम्भावना देखिएको छ। हिजो भर्खर नेकपा एमाले माधव पक्षका नेताहरुले प्रधानमन्त्रि ओलीलाई नै समर्थन छ भनेर हस्ताक्षर दिईसकेका छन्।
संविधानअनुसार र सामान्य नीति अनुसार पनि एकै नेताले दुईतिर समर्थन गर्न मिल्दैन। तर, माधव नेपाल समुहको देउवालाई गरेको समर्थन र हिजो भर्खर आफ्नै पार्टि भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन बाझिने निश्चितप्राय छ।
यसरी बाझिएपछि , कानुनत : स्वतरुपमा आज माधव पक्षका २७ जनाले देउवालाई दिएको समर्थन अवैधानिक हुनेछ किनकि अहिलेसम्म नेकपा एमाले फुटेको वैधानिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिईसकेको छैन र हिजो भर्खरको माधव नेपाल समुहको हस्ताक्षरले पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै माधव पक्षको समर्थन छ भन्ने जनाउँछ।
यहि खेलका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहुमत छ भनेर गर्नुभएको दावी नै सदर हुने सम्भावना प्रवल रहेको छ।
Previous रु. २ लाखको अक्सिजन किन्दा ४० लाख कमिशन खाने नाइकेहरु को हुन् ? हेर्नुहोस भिडियो
Next हेर्नुहोस जेष्ठ ८ गते शनिबार मे २२ तारीखको राशिफल, जय श्रीपाथीभरा माता !